आँचलको होस उड्यो, श्रीमान उदिपकी प्रेमिका बच्चा सहित आइन् [भिडियोसहित] – Dainiksamchar
HomeVideoआँचलको होस उड्यो, श्रीमान उदिपकी प्रेमिका बच्चा सहित आइन् [भिडियोसहित]
November 18, 2020 admin Video 6812
पोखरा । नवबिबाहित अभिनेत्री आँचल शर्माका लागि अत्यन्तै दुखद खबर आएको छ । उनले भर्खरै मात्र डा. उदिप श्रेष्ठसँग धुमधामका साथ बिबाह गरेकी थिइन् । त्यो निक्कै गसिप बनेको थियो ।
उनीहरुको बिबाहमा देखिएको तडक भडक देखि पुर्व प्रेमिकाको बारेमा हिजो आज निक्कै चर्चा भईरहेको छ । करिब एक वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरुले केहि साता अगाडी मात्र विवाहमा परिणत गरेका हुन् ।
निक्कै हुने खाने परिवारका यी दुवैले आफ्नो विवाहमा राम्रै खर्च गरेका थिए । स्टार होटेलमा रिसिप्सन देखि हेलीकप्टरमा गरिएको सवारीले फिल्मी नगरीमा एउटा तहल्का नै मच्चायो ।
यी दुइजना नया जीवन सुरु गर्दै गर्दा अर्को गसिपले पनि बजार तातिएको छ । हुनत उदिप श्रेष्ठले स्वीकारी सकेका छन । उनको पुर्व प्रेमिकाको बारेमा बोलिसकेका छन ।
उनको पहिलो प्रेमिका भने फिलिपिनी हुन् । दोस्रो प्रेमिका भने नेपाल कै हुन् । ति नेपाली प्रेमिका अरु कोहि नभएर नेपाल कै चर्चित भलिवल खेलाडी तथा नायिका सिपोरा गुरुङ्ग हुन् ।
यसै बीच उदिपको पुर्व प्रेमिका भनिएकी फिलिपिनी युवतीको तस्विर सामाजिक संजालमा सार्बजनिक भएको छ । प्रेमिकाको मात्र हैन तस्विरमा एउटा शिशु पनि देखिन्छ ।
तर ति शिशु उदिप र उनको प्रेमिका कै हो वा अन्य कसैको हो भन्ने भने स्पष्ट छैन । जुन शिशुसंग उदिप पनि संगै छन । तस्विर कहा कसले सार्बजनिक गर्यो त्यो भने खुलेको छैन ।
तर रिलेसनसिपमा मात्र रहेको बताउने उदिपलाई यो तस्विरले फेरी टाउको दुखाएको छ । पोखराबाट सञ्चालित समाचारपाटी डक कमले यो तस्विर सार्बजनिक गरेको हो ।[भिडियोसहित]
घरका सदस्यमा कोरोना भेटिएपछि सलमान ‘सेल्फ आइसोलेशन’ मा
October 6, 2020 admin Video 362
काठमाडौ । दागं जिल्लाको घोराही उपमहानगर पालिकामा एउटा अनौठो घटना भएको छ । एक जना पुरुषले आफ्नै श्रीमती उनको प्रेमीसंग विवाह गराइदिएका छन् । आफु श्रीमतीवाट पीडित भएको, आफु हुँदाहुँदै पनि श्रीमती अरु पुरुषसंग सम्बन्ध
October 8, 2020 admin Video 592
October 7, 2020 admin Video 1532
LEX 18 agenda conversation: Job club (117594)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (109592)
Hello world! (109155)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (108035)